Falsafadda libaaxa!! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Marka caqli xor ah loogu kuur galo sida ay nolosha ku socoto waxaa kuu so baxaya caddaalad darro weyn oo nolasha ka jirta. Nolosheena waxay ku xirantahay dhimashada iyo cunnida nafley kale oo badan .Boqortooyada Geedaha “Plantae “ oo ayadu cuntadeeda sameesata marka laga reebo, dhamaan noocyada kale ee noolaha ee aynu ka mid nahay, waxaan tamar ka helnaa cunida noole kale. Tusaale ahaan Bakteeriyada ilma aragtada ah, waxay ku noolyihiin waxa ay ka calafasadaan jirka bani’aadamka iyo oogada xoolaha kale oo dhamaantood ka wada mid ah boqortooyada waxa Afka qalaad lagu dhaho “Animalia.”. Ugaarsi yaab leh oo arxan daran ayaa ka dhex socda noolaha dhaxdooda si ay u helaan tamar ay dheefsadaan taas oo ah sida kaliya ee ay ku sii noolaan karaan. Qoraalkan kooban wuxuu isku dayi doonaa in uu soo bandhigo Falsafadda libaaxa laga baran karo ayadoo laga jawaabayo su’aalahan ah: “ Waa maxey sababta dadku u cunaan ama u ugaarsadaan qayb ka mid ah xoolaha ayagoo ka caaggan ama u arka xaaraan xoolaha qaarkood?